I-Semalt: Izihlungi zogaxekile zamahhala ze-Windows
Kunzima ukuvikela ibhokisi lethu lokungenayo kusuka kugaxekile nokungena malware namagciwane angenayo. Noma kunjalo, ngesikrini sokugaxekile, ungavimbela ukuhlaselwa kwe-malware ne-virus kanye nokulimaza uhlelo. Igor Gamanenko, i- Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, ikunika ukuthi ubheke izihlungi eziphambili ze-spam ze-Windows:
Ngenye yezinhlayiya zokugaxekile ezingcono kakhulu nezisebenzayo. I-Spamihilator uhlelo olulula ukusebenzisa futhi olukhangayo olusebenza nawo wonke amakhasimende we-imeyili. Le software yasungulwa yi-Bayesian Filters futhi isilinganiselwa esanelisayo kwi-intanethi - oculos oakley lente espelhada. U-Spamihilator usiza ukususa amaphesenti angu-90 wemilayezo yogaxekile ngaphambi kokuba afinyelele ebhokisini lakho lokungenayo. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa i-ID ID, i-MSN ID noma unayo i-akhawunti ye-Gmail, ungafaka futhi uhlanganise lesi sihlungi sogaxekile kalula futhi sizikhandle. Leli thuluzi lilungiswa kakhulu futhi lingasebenza ngamabili ama-30-bit no-60-bit izinhlelo zokusebenza.
I-Spamfence ingenye yezihlungi ezigaxekile zamahhala ku-intanethi. Kuyindlela elula, elula futhi elula yokulahla ama-imeyili ogaxekile. Ngaphezu kwalokho, kusiza ukuhlunga amagciwane ethu futhi isebenzise i-EXpurgate ukwenza imisebenzi yayo. I-eXpurgate iyindlela yokukhetha i-Spamfence evikela ibhokisi lakho lokungenayo impilo yonke.
Ithuluzi le-SpamExperts lisiza ukukhomba nokususa i-imeyili ogaxekile..Leli thuluzi lisebenza kahle ngama-ID we-imeyli futhi lilungisa noma yiluphi uhlelo ngokugcwele. Ingafakwa endaweni yangakini nasemafwini bese ihlola yonke imilayezo ephumayo engenayo. U-SpamExperts uye wathola ukuthandwa ngenxa yesikhombimsebenzisi esibonakalayo somsebenzisi kanye nenani elikhulu lokukhetha.
I-K9 inembile ngokunembile, isihlungi esilula, futhi esilula ukusebenzisa i-imeyli ye-imeyili. Leli thuluzi lisebenza ne-akhawunti ye-POP, ama-ID we-Gmail, ama-ID we-Yahoo, no-Rediff.com. Ikuvumela ukuba ufinyelele zonke izici zayo ngokusebenzisa ideshibhodi enobungane, lapho ungalungisa izilungiselelo zama-imeyili wakho futhi ungavimbela abagaxekile ukuba bakuthumele ama-imeyili angenalusizo futhi anonya.
Kuphephile ukusho ukuthi i-G-Lock SpamCombat iyithuluzi eliphelele, elisebenzayo nelisebenzayo elisiza ukuhlunga ama-imeyili ogaxekile njalo. Isebenzisa uhlu lwabahluleli be-DNS lokwenza izenzo zalo. I-G-Lock SpamCombat ine-filter ezenzakalelayo ye-imeyili evimbela ugaxekile nemilayezo enonya ekungabangela izinkinga kuwe. Ezinye zezici zayo ezivelele yizihlungi eziyinkimbinkimbi, ama-Whitelists, ama-blacklists, ama-validator e-HTML, izihlungi ze-DNSBL nama-filesi e-Bayesian. Ungakhetha noma yikuphi kwalokhu okukhethwa kukho futhi uwahlanganise ahlanganiswe ne-Windows, IMAP, ne-POP3.
Kuyiqiniso ukuthi i-MailWasher Free iyihlelo lokuhlunga ugaxekile, olusebenzayo, oluwusizo nenhle lwe-Windows. Le thuluzi yamahhala ingahlanganiswa nama-ID amaningi we-imeyili kanye nezihlungi ngaphandle kwe-malware namagciwane ngamasekhondi. Isixhumanisi esibonakalayo somsebenzisi nezinketho ezifana nokuhlunga ugaxekile nomsebenzi we-imeyili wokuhlunga nge-POP3, AOL, IMAP, ne-Gmail ngendlela engcono.
U-SpamWeasel uyaziwa kakhulu ngolimi lwawo olubhalwe ngokugcwele olusetshenziswayo ukuhlunga idatha engenamsebenzi nama-imeyili. Lena enye yezinhlelo ezinamandla kakhulu kokubili ama-imeyili akho nezinhlelo zokusebenza. Kubhala izihlungi ezintsha ukuze uvikele ukufika kwemilayezo engenangqondo phakathi nosuku.